‘गायनसङ्गीतमा उज्यालो भविष्य छ’ – Asan Bazaar Patrika
‘गायनसङ्गीतमा उज्यालो भविष्य छ’
काठमाडौं । “गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ…” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत जति चर्चामा आउन सकेको छैन ।
हाल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्यामप्रकाश तमोटमा क्रान्तिकारिता मात्र होइन, सरलता र शालीनता उत्तिकै छ । उहाँको गीत नेपाललगायत विश्वका १७ भाषामा अनुवाद भएर विश्वभर क्रान्तिकारी जनताबीच गुञ्जिरहेको छ । उनै गीतका सर्जक तथा सङ्गीतकार तमोट केही वर्षअघिसम्म भोजपुरको दाँवाँमा एक साधारण शिक्षकका रुपमा जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको थियो । पाँच वर्षदेखि मात्र काठमाडौँमा बस्दैआउनुभएका तमोटसँग राससका प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भट्टराईले गर्नुभएको अन्तरङ्ग कुराकानीको सम्पादित अंश ः (तस्वीरः नवीन पौडेल)
म कक्षा १० मा पढ्दा राल्फा समूहका सङ्गीत अभियानकर्मीहरू रामेश, मन्जुलहरू दाँवाँ आएका थिए र विद्यालयमा कार्यक्रम गरेका थिए । सदरमुकाम आसपास पनि कार्यक्रम गरेका थिए । उनीहरूले गाउने गीतको सन्देश र पृष्ठभूमि बेग्लै र आकर्षक हुन्थ्यो । यसक्रममा मञ्जुल प्रभावशाली तरिकाले बोल्नुहुन्थ्यो । उहाँले विशेष प्रभाव पार्नुभयो । उहाँका कुराले निर्धा निमुखाको मन छुन्थ्यो, कति त धर्धरी रुन्थे, मन पगाल्थ्यो । राल्फा समूहमा पारिजातको नेतृत्वमा रामेश, रायन, मञ्जुल आदिको साङ्गीतिक समूह बनेको थियो । युवामा विद्रोहको भावना थियो । राल्फा शब्द रामेश र मञ्जुलले सिर्जना गर्नुभयो, सबैलाई स्वीकार्य भयो तर यसको कुनै शाब्दिक अर्थ भने छैन । यो शब्द नाममा जातभन्दा फरक हुने र विभेद हटाउने गरी प्रयोग गरिएको थियो ।
यो गीत मैले २०३१ सालमा लेखेको हुँ । राल्फासंँग भेट भएपछि उनीहरूका गीतले तान्यो, धरानमा पनि प्रगतिशील विद्यार्थीसंँग सङ्गत भयो । त्यहाँ रामेश, बम देवान, गोविन्द विकल आदिसंँग भेट भयो । चिनियाँ क्रान्तिको प्रभाव पनि परेको थियो, किनकि माओत्सेतुङले गाउँ पहिले मुक्त हुनुपर्छ र शहरलाई घेर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । चीनजस्तै नेपालमा पनि किसानको नेतृत्वमा क्रान्ति हुने स्थिति भएकाले माओको प्रभाव परेको अवस्थामा यो गीत भोजपुरको दाँवाँमा लेखेको हुँ । यो गीत सर्वप्रथम विसं २०३६ मा ‘सङ्कल्प’ पत्रिकामा छापिएको थियो ।
यसमा सङ्गीत २०३१ मा म आफैँले दिएको हुँ । पहिला गीत गाउँदा त्यति वास्ता भएन तर क्याम्पसका सरहरूले भने मन पराउनुभयो । पहिलो पटक भोजपुर क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रममा भोजपुरका शम्भु श्रेष्ठ, दिल्पाका डिल्लीरमण राई र मैले गाएका थियौँ । त्यस बेला भोजपुर क्याम्पसमा सुरेन्द्र जोशी क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो । पछि यस गीतलाई एकजना भाइले काठमाडौँ ल्याएर रामेशलाई देखाएछन् । त्यसपछि उहाँले यसलाई गाउन थाल्नुभयो ।
यो गीत १७ भाषामा अनुवाद भइसकेको छ । ती भाषाहरूमध्ये केही नेपालका जिरेल, तामाङ, मैथिली, नेवार, राई वान्तवा, लिम्बू छन् भने विदेशी भाषामा हिन्दी, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, फ्रेञ्च आदि रहेका छन् ।
विसं २०३०÷३२ देखि नै सङ्गीत क्षेत्रमा लागियो, लेखन खासगरी गीत लेखनमा लागी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि, पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि काम गरेको हुँ र अहिले लोकतन्त्रका अनुयायीहरू नै सरकारमा भएकाले मलाई सम्झनुभयो । मेरो गीति योगदानलाई कदर गर्दै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले मलाई यस पदमा उपयुक्त ठान्यो । यसका लागि तपार्इँको संचार माध्यममार्फत सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सङ्गीत नाट्य, ललितकला र नेपाल प्रज्ञा –प्रतिष्ठानहरू गाभिनुपर्छ भन्ने भनाइ कतिको उचित हो ?
देशको आवश्यकता र परिस्थितिले तीन वटा प्रतिष्ठान सिर्जना भएका हुन् । फेरि एउटैमा आउनु जायज होइन । यिनीहरूलाई अलग अलग ढङ्गले नै विकास गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले बेग्लै विधागत विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले दोहोरी गीतहरू व्यापक भइरहेको सन्दर्भमा अन्य लोकगीतहरू खासगरी पूर्वीय भाकाहरू ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, ती गीतहरूको उत्थान हुन सक्छ कि सक्दैन ?
कलाकारको आफ्नो आआफ्नो विशेषता हुन्छ, तुलना न्यायोचित नहोला । उहाँहरूको आफ्नोपन थियो । अहिले पनि आफ्नोपन छ, तुलना गर्न उचित हुँदैन ।
हाल यहाँका गीतको सङ्ख्या कति पुग्यो ? आफ्ना मन पर्ने गीतहरू कुन कुन हुन् ?
मैले रचना गरेका गीतहरू तीन सयभन्दा बढी छन् । विसं २०५८ मा एउटा गीतसङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ । मैले नेपाल भाषामा पनि आठ नौ वटा गीतको एउटा सङ्कलन निकालेको छु । मेरो गीत ‘गाउँगाउँबाट उठ’, बिएको पाठयक्रममा पनि राखिएको छ । आफ्ना सबै सिर्जना राम्रै लाग्छ, तर पनि ‘आँधी बताससँंग जुधेर फुलेको सुन्दर फूलजस्तो’ र ‘मलाई पनि वरपीपलझैँ हुन मन लाग्छ, म कथा भनिरहन्छु’ विशेष राम्रा लाग्छन् ।